I-Astoria Uniontown Studio iyahamba iye ezitolo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kathleen
Isitudiyo se-Astoria esiphezulu esinekhishi eligcwele ne-wifi yamahhala. Ubuningi bezihambeli ezingu-2. Ibanga legesi, i-microwave, ifriji, i-coffeemaker, i-teakettle. I-TV ye-Flatscreen enokubhaliswa kwemuvi. Indawo yokupaka enikezelwe ngaphandle komgwaqo ngqo phambi kweyunithi. Ifulethi lisezingeni eliphezulu lendlu engu-1900. Kunezitebhisi eziyi-17 ezikhuphukela efulethini. Ukufinyelela ku-Astoria's Riverwalk kungamabhulokhi ambalwa nje. Indawo yokuhlala enelayisensi yedolobha #19-02
Inani eliphezulu lezivakashi ezingu-2. Umbhede olingana neNdlovukazi ekamelweni lokulala, izitolo ezitholakala kalula kumalambu etafula lasebusuku. Ikhishi eligcwele elinobubanzi, isiqandisi esingaphansi (asikho isiqandisi), umenzi wekhofi, igedlela likagesi, amabhodwe, amapani, izitsha, izitsha.
Asukume eshaweni enamathayela endlini yokugezela. I-TV elungele i-inthanethi ekamelweni lokubhalisela isevisi ye-movie.
I-wifi yamahhala yamahhala.
Ukuthobela umthetho wendawo - izintela zendawo zikhokhiswa idolobha nesifunda. Lokhu kungaphezu kwentela yezwe ethathwe i-Air BnB njengengxenye yokubhukha kwakho. Njengoba ingekho enye indlela yokuqoqa lokhu kusenesikhathi - yilokho 'imali yokuhlanza'. :(
Kufanele kube ngokomthetho bakwethu.
4.82(300 okushiwo abanye)
4.82 · 300 okushiwo abanye
Sibuyisele le ndlu ka-1900 e-Uniontown yomlando yase-Astoria eminyakeni embalwa edlule. Enye yamabha e-eclectic e-Astoria, i-coffeehouse enkulu nezindawo zokudlela kungaphakathi kwamabhulokhi amabili.
Ngibingelele ngikunike ukhiye. Ngemva kwalokho - konke okwakho. Ngisebenza kude nendlu e-Astoria nsuku zonke futhi ngiphendula ngokushesha imibhalo noma izingcingo. :)